VILLA IRENA gem enomtsalane ibekwe Vipava Valley
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarija
Xa iyi-91 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
IVilla Irena ikwiVipavski Križ kwaye yeyelinye lawona matye ezikhumbuzo amahle eSlovenia. Indlu yeminyaka engama-500 yalungiswa ngokupheleleyo kwaye yenzelwe indawo yokuphumla. Ubukhethekileyo bendlu yithafa egqunywe ngemidiliya. Apho uya kufumana itafile kunye nezitulo okanye i-hammock elungele iingokuhlwa ezishushu zasehlotyeni.
Indlu inemigangatho emibini. Kumgangatho ongezantsi kukho ikhitshi, indawo yokudlela, igumbi lokuhlambela kunye nendawo encinci yomlilo. Phezulu kwizinyuko zaseFinland ligumbi lokulala elinebhedi edibeneyo kunye nesofa ejikela ebhedini.
✅I-WiFi enesantya esiphezulu
✅Ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo
✅Igumbi lokulala elineekhethini ezimnyama
✅Indawo yokusebenza ehambelana neLaptop
✅Ilungele ukuhlala ixesha elide
✅Indawo yokuhlala ekhululekileyo
I-wifi ekhawulezayo – i-91 Mbps
5.0 ·Izimvo eziyi-31
IVipavski Križ yenye yezona zikhumbuzo zintle zenkcubeko yaseSlovenia. Ukusekwa kwelali kuqale ngenkulungwane ye-13, kwaye uhambo oluya kule lali aluzange luphoxe, njengoko idolophu izele ngamabali amadala, kwaye kukho amathuba amaninzi okuhamba, ukuhamba ngeenyawo, ukukhwela ibhayisekile kunye nolonwabo lokupheka kwindawo ejikelezileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Marija